Vehivavy dongadonga : Mahay mampirevy !
Tsy ny vehivavy tsara bika sy mirafi-batana tsara ihany no afaka manome fahafinaretana lafatra eny am-pandriana.
Fa isan’ny mitondra fahafinaretana lalina ny miray ara-nofo amin’ny fomba miadana, na ilay antsoina hoe : “slow sex”.
Araka ny nambaran’i Alain Heril, manam-pahaizana momba ny saina sy ny fananahana, dia mifototra amin’ny fahatsapana entin’ny savaranonando sy ny firaisana ara-nofo miadana ny « slow sex », izany hoe : tsy atao lohalaharana ny fifampitsofohan’ny taovam-pananahana ary raha efa tatsofoka indray ny filahiana dia atao izay ahatsapana ireo fahafinaretana madinika kanefa mafonja entin’izany.
Atao maharitra, araka izany ny savaranonando. Fomba ahafantarana ireo faritra tena mora tohina rahateo izany. Ny tanjona dia ny hahatsapana fahafinaretana, fa ihany koa hiakaran'ny filàna. Tsy misy fetra ny ora hanatanterahana azy, raha ny fanazavan’i Alina Heril hatrany. Rehefa tafiditra indray ny filahiana dia ezahina ho tsapan’ny andaniny 2 ny fahafinaretana azo isaky ny manao fihetsika iray ny lehilahy, na ny vehivavy.
Manome vahana ny kalitao
Nanambara moa ity manam-pahaizana ity fa ny kalitaon’ny firaisana ara-nofo no tadiavina fa tsy ny hery, na ny fahaizana manao izany. Izany no antony mahatonga azy tsy mikendry ilay fahafinaretana lehibe, fa ireo fahafinaretana tsotra sy madinika, izay rehefa mitombo tsikelikely dia ahazoana ilay fahafinaretana faran-tampony ihany.